सयौं आमा बचाउने ‘हरि दिदी’
भदौ १७, २०७४ शनिवार १६:२९:०० प्रकाशित
बाग्लुङ जनस्वास्थ्य कार्यालयमा कार्यरत नर्स हरिकाशी पालिखे (५८) जीवनमा आमा बन्ने चरणमा कहिल्यै प्रवेश नै गरिनन् । तर, उनले नर्सिङ पेशामा गरेका काम हेर्ने हो भने उनी धेरै बच्चाकी आमा हुन्, सयौं आमाकी जीवनदाता हुन् ।
नर्स भएयता हरिकाशीले ‘सुरक्षित मातृत्व’ फाँटमा काम गर्दै आएकी छिन् । यस बीचमा उनले स्वास्थ्यकर्मीको टोलीसँग बाग्लुङका दुर्गम गाउँमा पुगेर कैयौं आमाको ज्यान जोगाएकी छिन् । आमा–शिशु सुरक्षाका साथै उनी परिवार नियोजन र खोप कार्यक्रममा पनि सहभागी हुँदै आएकी छिन् ।
स्वास्थ्य शिविरको टोलीमा सहभागी भएर उनी बाग्लुङको साविकका ५९ गाविस पुगेकी छिन् । अधिकांश ठाउँमा मोटरबाटो नपुगेको त्यो बेलामा धेरै गाविस हिँडेरै गइन् । बाग्लुङ बजारबाट बुर्तिबाङ पुग्न तीन दिन लाग्थ्यो । पुगेकामध्ये सबभन्दा टाढाको ठाउँ सुनखानी (३६ कोस) थियो ।
दुर्गमका ती ठाउँहरुमा जाँदा अधिकांश महिलाको समस्या थियो, पाठेघर खस्ने । अझै पनि ग्रामीण भेगका महिला आफ्नो प्रजनन समस्याबारे हत्तपत्त नखुल्ने अवस्थामा त्यो बेला त झन् बेग्लै परिस्थिति थियो । महिलाका रोग ठूलो लोकलाजको कुरा हुन्थ्यो । उपचारका लागि अस्पतालमा जाने त कसैले कल्पनासम्म गर्दैनथे ।
त्यस्तो समयमा हरिकाशीसहितका स्वास्थ्यकर्मी निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लिएर तिनै दूरदराजका गाउँमा पुगे । उनीहरु जहाँ–जहाँ पुगे, रोग लुकाएर बस्ने महिलालाई स्वास्थ्य शिविरसम्म ल्याउन जनचेतनाका कार्यक्रम अघि बढाए ।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयबाट विभिन्न गाविसमा वर्षमा २–३ वटा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन हुन्थ्यो । शिविरसँगै चेतनामूलक कार्यक्रम जारी राख्दै जाँदा महिलाको आँखाबाट लोकलाज हट्न थाल्यो र उपचार गराउन आउनेहरुको भीड विस्तारै बढ्न थाल्यो ।
त्यो समयमा स्वास्थ्य शिविर लैजाँदा दुई जना डाक्टर, दुई जना नर्स र अन्य सहयोगीसहित टोलीमा १०÷१२ जना हुन्थे । साथमा उपकरण र औषधि त हुने नै भए, गाउँमा बत्तीको असुविधा हुने भएकोले जेनेरेटर समेत बोकेरै लगिन्थ्यो ।
०३६ सालबाट अनमी र ०४९ देखि स्टाफ नर्सको रुपमा सेवा थालेकी हरिकाशीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३५ वर्ष गुजारिसकिन् । यो अवधिमा उनी पाठेघर खसेका कति महिलाको उपचारमा संलग्न भइन् होला त ?
अहिलेसम्म करिब सय वटा स्वास्थ्य शिविरमा उनी सहभागी भइसकेकी छिन् । भन्छिन्, ‘वर्षमा ३ वटा क्याम्प गर्दा सरदर ३–४ सय महिलालाई सेवा दिइयो होला, त्यो हिसाबले अहिलेसम्म ४–५ हजारलाई त सेवा दिइयो ।’
त्योमध्ये ०५९ सालमा गम्भीर अवस्थाकी एउटी महिलालाई बचाएको घटना उनी कहिल्यै भुल्न सक्दिनन्, जुन उनको लागि जीवनको असाध्यै सुखद दिन हो ।
बाग्लुङको गल्कोटमा परिवार नियोजनको क्याम्प चल्दै थियो । डा. तारा पौडेल, डा. उपेन्द्र र अन्य सदस्यको साथमा हरिकाशी पनि टोलीमा सहभागी थिइन् । दुईदिने शिविर चलिरहँदा त्यहाँ खबर आयो, ४५ किलोमिटर टाढाको बुर्तिबाङमा एक महिला सुत्केरी हुने क्रममा युट्रिन प्रोल्याप्स भएर (पाठेघर बाहिर निस्किएको) जीवन–मरणको दोसाँधमा छिन् ।
भ्यासेक्टोमी र मिनील्याप गर्न गएको स्वास्थ्यकर्मी टोलीसँग सोही अनुसारको सीमित उपकरण र औषधि थियो । उनीहरु त्यही अवस्थामा सुत्केरीको ज्यान जोगाउने झिनो आशाले बुर्तिबाङतिर लागे । टोली पुग्दा झमक्क साँझ परिसकेको थियो ।
‘ती महिला स्वास्थ्य चौकीको लेबर रुपमा दयनीय अवस्थामा छटपटाइरहेकी थिइन्’, उनी सम्झिन्छिन्, ‘महिलाको पाठेघर फुटेर बच्चाको हात बाहिर निस्किएको थियो ।’
तीन दिनदेखि त्यही हालतमा रहँदा कोठा निकै दुर्गन्धित बनेको थियो । गर्भवतीलाई स्वास्थ्य चौकीले पाल्पा रिफर गरे पनि स्वास्थ्य शिविरका डाक्टर यतै आउँछन् भनेर परिवारजनले तीन दिनदेखि त्यहीँ राखेका रहेछन् ।
बच्चा त मरिसकेको थियो । तर, चिकित्सक र नर्सको टोलीले जोखिम मोलेर आमालाई बचाउन सफल भयो ।‘तीन दिनसम्म पाठेघर निस्किएकै अवस्थामा रहँदा सुत्केरीलाई कति संक्रमण भयो होला ! तर, महिलाको शरीर कति धेरै ज्याद्रो हुँदोरहेछ, उनको ज्यान जोगियो र अहिलेसम्म कुनै समस्या आएको छैन’, आफूसहितको टोलीले पाएको सफलतामा हरिकाशी गर्व मान्छिन् ।
यसरी सुत्केरी आमा र नवजात शिशुको ज्यान जोगाएको उनीसँग अनुभवको सँगालो नै छ । त्यसो त सेवामूलक पेशामा सेवा गर्नुलाई स्वाभाविक कर्म मानिन्छ । तर, आफूहरुले गरेका काममा कतैबाट थोरैतिनो पनि जस नपाउँदा उनको मन खिन्न हुन्छ । भन्छिन्, ‘कुनै नेताले कतै दुर्गममा गएको बेला गर्भवतीलाई हेलिकोप्टर चढाएर अस्पताल ल्याउँदा ठूलो प्रचार हुन्छ । हामीले उहिल्यैदेखि त्यत्रो गाविसमा त्यति धेरै महिलालाई सेवा दिँदै आयौं, यसको भने कुनै गन्ती छैन !’
पहिले बाग्लुङ जिल्ला अस्पतालमा मात्र प्रसूति सेवा उपलब्ध थियो, महिनामा १२÷१५ वटा डेलिभरी हुन्थ्यो । अहिले भने जनस्वास्थ्य कार्यालय अन्तर्गत जिल्लाभरिमा ४५ वटा बर्थिङ सेन्टर सञ्चालनमा छन् । मातृ–शिशु मृत्युको खबर हत्तपत्त सुन्नुपर्दैन ।
हिजोका दिनमा संस्थागत डेलिभरी सेवा नपाउँदा आमा र शिशुले ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था थियो, पछिल्लो समय भने गाउँका स्वास्थ्य चौकीहरुसम्म प्रसूति सेवा फैलिएको देख्दा नर्स हरिकाशी दंग पर्छिन्, ‘हाम्रा बर्थिङ सेन्टरहरु राम्रो सञ्चालन भइरहेको छ, त्यही नै मलाई खुसी लाग्छ ।’
उनले सुरक्षित मातृत्वमा केन्द्रित भएर महिलाहरुको स्वास्थ्य समस्या मात्र सुल्झाइनन्, स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउन कतिपय अवस्थामा व्यवस्थापन र समन्वयको काम समेत गरिन् ।
बाग्लुङको रायडाँडा भन्ने स्वास्थ्य चौकी निकै गएगुज्रेको अवस्थामा थियो, हेर्दा गोठ जस्तो । दुई लाख रुपैयाँ सहयोग पाएपछि स्थानीय जनताले स्वास्थ्य चौकी चिटिक्क पारे । ‘वान वल्र्ड वान हार्ट’ नामक संस्थाले आर्थिक सहयोग गरेको थियो, जसका लागि आफूले समन्वय गरेको हरिकाशी सम्झिन्छिन् ।
कतिपय ठाउँमा बर्थिङ सेन्टर खोलेपछि त्यो चलाउन जनशक्ति, आवश्यक फर्निचर र उपकरण जुटाउन पैसा नहुने समस्या हुन्थ्यो । त्यतिबेला पनि उनले व्यवस्थापन समितिमार्फत गाविससँग आग्रह गरेर अनमीको लागि तलब व्यवस्था मिलाइन् र फर्निचरको जोहो गरिन् । औजार र उपकरणका लागि वान वल्र्ड वान हार्ट लगायत संस्थासँग सहयोग मागेकी थिइन् ।
स्वास्थ्य सेवाको ३५ वर्ष लामो करिअरमा हरिकाशी बढीजसो बाग्लुङ जिल्लामै केन्द्रित हुनुमा पनि संयोगहरुकै खेल छ । पोखराको रानीपौवा घर भएकी उनले नेपालगञ्जमा ०३६ सालमा अनमी पढेपछि सुरुमा सल्यान जिल्लामा पोस्टिङ पाएकी थिइन् । तर, त्यहाँ नगई उनले काजमा गण्डकी अस्पतालमा काम गरिन् ।
अनमीका रुपमा काम गर्दै जाँदा उनलाई स्टाफ नर्स पढ्ने सोच आयो । यसो हुनुमा उनले सिनियरबाट खेप्नुपरेको ‘हैकम’ नै कारक थियो । चाडबाडको बेला स्टाफ नर्सहरुले आफू छुट्टी लिएर उनीसहितका अनमीहरुलाई काममा लगाउँथे।
उनी हाँस्दै सुनाउँछिन्, ‘अनमीलाई स्टाफ नर्सले गरेको पेलान देखेर स्टाफ नर्स पो बन्नुपर्ने रै’छ भन्ने लाग्यो ।’ उनले ललितपुरमा स्टाफ नर्स पढेर पास भइन् र नाम निकालेर ०४९ सालमा बाग्लुङ जिल्ला अस्पताल पोस्टिङ पाइन् । कास्कीसँगै जोडिएको छिमेकी जिल्ला भएकाले उनलाई सहज नै लाग्यो ।
गाडीको राम्रो सुविधा नभएको त्यो बेला उनी पहिलो चोटि जागिरमा जाँदा डम्फरमा चढेर बाग्लुङ बजार पुगेकी थिइन् । उनले जिल्ला अस्पतालमा काम थाल्दा डा. हरिहर खनाल, डा.प्रकाशराज रेग्मी र स्टाफ नर्सहरु मंगलाराज भण्डारी, जानकी केसी लगायत थिए ।
२०५३ साउन १६ मा उनी जिल्ला अस्पतालबाट बाग्लुङकै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय सरुवा भइन् ।
०५५ मा उनलाई सुर्खेत सरुवा गरिएको पत्र आयो । तर, उनलाई त बाग्लुङको हावापानीमा रस बसिसकेको थियो, त्यसैले उनले त्यो सरुवा बदर गराइन् । केही समयपछि फेरि दमौली र बाग्लुङको स्टाफ नर्सलाई साटफेर गर्नेगरी सरुवा भयो । त्यसमा भने दमौलीकै साथीले सरुवा भए आफूलाई असुविधा हुने भन्दै बदर गरौं भनिन्, कसिंगर हावाले उडाए जस्तो भयो ।
यी संयोगहरुबाट ०४९ सालदेखि निरन्तर बाग्लुङमै रहेकी हरिकाशीलाई पछिल्लो समय साउनदेखि बाग्लुङ नगरपालिकामा काजमा पठाइएको छ।
यति लामो समय बाग्लुङको सुगमदेखि दुर्गमसम्म घुमेर जिल्ला स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था बुझिसकेकी उनले यसमा दखल नै बनाइसकेकी छिन् । उनी छिन् र नयाँ आउने डीएचओलाई सजिलो हुन्छ, जिल्लाको स्वास्थ्य क्षेत्रबारे केही सोध्नु र सरसल्लाह गर्नुपरे उनलाई नै खोजिन्छ । आफ्नो कार्यकालमा अहिलेसम्म ६ जना डिएचओ बेहोरेको उनी सुनाउँछिन् ।
‘पहिलेका हाकिम (डिएचओ) हरुलाई धेरै अप्ठेरो थियो, अहिले त धेरैजसो ठाउँमा मोटर पुगिसकेको छ’, पहिले र अहिलेको असुविधा र सुविधालाई नर्स हरिकाशी तौलिन्छिन्, ‘पहिलाको हाकिमले जति दुःख पाए, अहिलेकाले त्यस्तो खेप्नुपर्दैन । धेरै समस्या पुरानाले नै व्यवस्थापन गरिसकेका छन् ।’
नर्स भएयता पहिले आफू अनमी हुँदा नर्सहरुबाट खेप्नुपर्ने जस्तो शासन उनले जुनियरहरुमाथि गर्ने गरेकी छैनन् । तर, सहकर्मी र जुनियरहरुमाझ उनको छवि अलि कडा खालकै छ । अनमी बहिनीहरुलाई उनी बर्थिङ सेन्टरमा गर्भवतीहरुलाई जम्मा ४ पटक भिजिट गर्न भन्नू, जनतालाई अकालमा मर्न नदिनू भनेर कराइरहेकी हुन्छिन् ।
‘मैले मेरो घरको लागि र व्यक्तिगत फाइदाको लागि कराएको हैन, जिल्ला स्वास्थ्यको टार्गेट हो भनेर उनीहरुलाई सम्झाउँछु’, उनी भन्छिन् ।
यसरी सम्झाउँदा कतिले मनन गर्छन्, कतिले यिनी वित्थै गनगन गर्छिन् भनेर चित्त दुःखाउने गर्छन् । तर, पुरानाहरुमा भने हरि दिदी कराए पनि माया गर्छिन् र काम पनि सिकाउँछिन् भन्ने छाप छाडेकी छिन् उनले ।
कडा मिजासको छवि बनाएकी यी हरि दिदीले सधैं सहकर्मी दिदी–बहिनी र बिरामी महिलाहरुकै घेरामा उमेर बिताइन् । कामसँगै उनको प्रेम साटियो । बिहे गर्नेबारे सोच्न समेत भ्याइनन् ।
हाल ५८ वर्षमा हिँडिरहेकी उनी मुस्कुराउँछिन्, ‘खै, बिहेको लागि सोच्न फुर्सद नभएको भनूँ कि के भनूँ, त्यो बाटोतिर लागिएन ।’ यो कुरामा उनले दिदीहरुकै बाटो पछ्याएकी हुन् भन्दा हुन्छ । ६ दिदीबहिनीमध्ये कान्छी रहेकी उनका सबै दिदीहरु अविवाहित नै बसे ।
अब दुई वर्षपछि उनको सेवा अवधि सकिँदै छ । यो अवधिमा आफूले जानेसम्म र बुद्धिले भ्याएसम्म सेवा दिएर महिलाहरुलाई बचाएकोमा उनी सन्तोष मान्छिन् ।
अवकाशपछि कतै निजी क्षेत्रमा जागिर खाने रहर नभए पनि उनीभित्र सेवा भाव भने अझै टनाटन छ । ६० टेकेपछि सुस्ताउनेभन्दा पनि कतैबाट सहयोग खोज्नेहरुकै बोली सुन्ने ध्याउन्नमा उनी बस्नेछिन् ।
उनले सुनाइन्, ‘जागिर छोडेपछि पनि कसैले मेरो विधा सुरक्षित मातृत्वमा सेवा र सहयोग माग्यो भने म दिन तयार छु । कसैले सम्झिए परिवार नियोजनको क्याम्प चलाउन पनि म हाजिर हुनेछु ।’